राष्ट्र बैंकले ८ अर्ब १० करोडको ट्रेजरी बिक्री गर्दै, बोलकबोल कहिले ? - नेपालबहस
राष्ट्र बैंकले ८ अर्ब १० करोडको ट्रेजरी बिक्री गर्दै, बोलकबोल कहिले ?
| ७:०२:३४ मा प्रकाशित
१६ चैत, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ८ अर्ब १० करोड रूपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने भएको छ ।
बैंकले २८ दिनको अवधिको लागि ५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न लागेको हो । उक्त ट्रेजरी बिल २०७८ साल वैशाख १४ गते परिपक्क हुनेछ । यसैगरी, बैंकले ९१ दिनको अवधिको लागि १० करोड रूपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न लागेको हो ।
उक्त ट्रेजरी बिल २०७८ साल असार १५ गते परिपक्क हुनेछ । त्यस्तै, बैंकले १८२ दिनको अवधिको लागि ३ अर्ब रूपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न लागेको हो । उक्त ट्रेजरी बिल २०७८ साल असोज १२ गते परिपक्क हुनेछ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यो ट्रेजरी बिल आज (चैत्र १६ गते, सोमबार) दिउँसो ३ बजे बोलकबोल भएर भोली (चैत्र १७ गते, मंगलबार) बिक्री हुनेछ ।
ट्रेजरी बिलको बारेमा अन्य विवरण यस प्रकारको छः
आजदेखि पशुपति क्षेत्रका सबै मन्दिर बन्द २ मिनेट पहिले
गोरखामा नगद चोरी गरी फरार युवक पक्राउ १५ मिनेट पहिले
दुधौलीका तीन वडा एक हप्ताका लागि बन्द १९ मिनेट पहिले
फेवातालमा माछापुच्छ्रेको छायाँ २२ मिनेट पहिले
२४ वर्षपछि सडक कालोपत्र हुँदा स्थानीयमा खुशी २४ मिनेट पहिले
राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ता आब्हान ३९ मिनेट पहिले
पूर्व सभापति न्यौपानेको निधनमा डा.शेखरद्वारा दुःख व्यक्त ३९ मिनेट पहिले
आज बिहानैदेखि भीमफेदी–कुलेखानी सडकखण्ड अवरुद्ध ४१ मिनेट पहिले
पातारासी हिमालको काखमा स्याउ बगैँचा ४६ मिनेट पहिले
बल प्रयोग गरेर भएपनि वसन्तपुर क्षेत्रका अनधिकृत पसल र टहरा हटाउँछौं : कामपा प्रहरी ३ हप्ता पहिले
सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत पक्की चिहान २ हप्ता पहिले
आजबाट नुवाकोट ‘लकडाउन’ ९ महिना पहिले
शेयरबजार बलियो मनोविज्ञानका साथ बन्द हुन सफल ! ३ महिना पहिले
परराष्ट्रमन्त्रीले आफ्नो शैक्षिक योग्यतादेखि लिपुलेक प्रकरणमा मौनव्रत तोडन युवानेता भण्डारीको आग्रह ११ महिना पहिले